China Biomass Pellet Machine ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Kingoro
Biomass Pellet igwe
Ngwurugwu na-eme ihe
Pellet mbukota Machine
Pulse ustjá mwepụ
Adreesị: No.666 Fengnian Road, Jinan City, Shandong Province, China
Ewepụghị Die Pellet Machine
● Aha ngwaahịa: Nhazi Ọhụrụ Biomass Pellet Machine
:Dị: Mgbaaka Mgbu
● Ike: 55/90/110/132/160 / 220kw
A-ac Ike: 0.7-1.0 / 1.0-1.5 / 1.5-2.0 / 1.5-2.5 / 2.5-3.5t / h
Auxiliary: conveghasa ebu, ájá mkpoko, Electronic Control Cabinet
Otu Kwụsị Ọrụ Of Biomass Pellet Equipment
Anyị na-enye usoro niile maka usoro mmepụta ihe nke biolet. Igwe osisi pellet, ahihia pellet igwe, igwe osisi pellet, alfalfa pellet igwe, nri igwe pellet igwe, organic fatịlaịza granulator, yana ngwe osisi, osisi chipper, hama mill, rotary draya, igwekota, ịwụ igwe, belt conveyors na countercurrent oyi bụ isi ngwaahịa anyị na-arụpụta.
SZLH660 pellet igwe bụ anyị ọhụrụ imewe maka vetikal mgbanaka anwụ pellet machine.With 132kw moto, na igwe ikike bụ 1.5-2.0t / h na mgbe ụfọdụ, ọ pụrụ iru 2.5t / h.Be N'ihi ya nke ọma arụmọrụ, ọ bụ nnọọ ewu ewu na A na-agbatị ndụ onye na-ewetara ya oge ugboro 3 karịa ụdị ndị ọzọ. Ndị na-agba ọsọ na-agbazi usoro nnwale na-enweghị onwe ha. arụmọrụ ya na-adịwanye mma na ndụ ọrụ dị ogologo.
Osikapa osikapa, ahịhịa, okpokoro mkpụrụ sunflower, shee ahụekere na akwa mịlon ndị ọzọ; Alaka, ogwe osisi, ogbugbo, achara, na ihe mkpofu osisi ndị ọzọ; strawdị ahịhịa ọka ọ bụla, roba, ciment, isi awọ Slag na ngwa ndị ọzọ kemịkalụ, wdg.
24 Awa Ọrụ Online.
Ọrụ nsuso ụzọ niile enyere site na itinye iwu ka nnyefe.
Ọzụzụ n'efu maka ịrụ ọrụ, nbipu na ndozi kwa ụbọchị.
Anyị nwere ike inye echichi ndu ọkachamara.
Otu afọ akwụkwọ ikike na niile-gburugburu mgbe-sales ọrụ.
Ahaziri imewe na eruba chaatị dị maka ndị ahịa anyị.
Independent R&D otu na nlezianya & na nkà mmụta sayensị management usoro.
Ndị Ahịa Globalwa
Nke gara aga: Pellet mbukota Machine
Osote: Ugboro abụọ aro igwekota
Biomass Wood Pellet igwe
Biomass osisi Pellet Mill
Ndi ochichi nke UK weputa ohuru biomass ...
Otu esi amalite site na obere ulo oru na ...
Hammer Mill na oké ifufe, Ogige osisi ibe, Anụ nri Pellet Mill, Egweri Machine N'ihi Wood, Osisi Crusher, Belt akwagharị Hammer Mill,